OR Brexit | Refugee Info Bus
Hanga ammaatti maal fa'atu jijjiirame?
Biyyi UK 31, January 2020 irratti ifaan ifatti Gamtaa Awuroppaa keessaa baaateerti.
Adeemsi Immigireeshiinii fi koolugaltummaa biyya UK ammatti hin jijjiiramne. Biyyi UK ammas miseensa immigireeshiinii fi koolugaltummaati kanaafuu seerota Awuroppaa hunda kabajjuu qabdi.
Itti aanee maaltu uumama?
Biyyi UK ammatti yeroo ceehumsaa keessa jirti kunis kan akka dhabbatuuf itti beellamame 31 December 2020 (kunis yoo kan hin dheeressine ta'eedha). Adeemsi dhimmoota immigireeshiinii 31 December 2020 duratti hin jijjiiramu, garuu sana booda ni jijjiirama. Haalli kunis akkamitti akka jijjiiramu ammatti wanti nuti beeknu hin jiru.
Odeedfannoo koolugaltummaa fi baqattootaa 31 December 2020 booda
Yeroo ammaatti biyya UK-ti seeronni kooolugaltoonni fi baqattoonni ittiin bulan lamatu jiru: Seeraa immigireeshiinii biyya keessaa fi woliigaltee Awuroppaa Dubliin dha. Imigireeshiinii baqaa kan biyya keessaa fi adeemsa EU Dubliin dha.
Gaafa guyyaa 31 December 2020 irraa kaasee, biyyi UK miseensummaa woligaltee Dubliin keessaa ni baati. Kana jechuun:
Biyyi UK koolugaltoota kana dura biyya EU jalqabaa dhaqaniitti ykn keessa qaxxaamuranii dhufaniitti deebisuu dhabuu dandeetti.
Biyyi UK kuusaa asharaa qubaa kan may not have access to the EURODAC fayyadamuu hin dandeettu. Kuusaan kunis koolugaltoota adda baasanii gara biyyoota EU deebisuudhaaf kan dhimma ittibbahaniidha.
Seerri maatiidhaan deebi'anii wolitti makamuu jijjiiramuu danda'a.
Bireksit booda maatiidhaan deebi'anii wolitti makamuu
Yeroo ammaatti biyya UK-ti karaan maatiidhaan deebi'anii wolitti dhufaniin lamatu jira: Adeemsa Immigireeshiinii fi adeemsa Dubiliiniiti. Bireeksit booda karaan maatiidhaan deebi'anii wolitti dabalamaniin karaa seera Immigireeshiinii biyya keessa qofaan. Yeroo ammaa kana seerri Immigireeshiinii adeemsa Dubiliin caalaa jabaataadha.
Yeroo ceehumsaa booda mootummaan UK gamtaa awuroppaa wojjiin wolii galtee haaraa carraan uumachuudhaa ni jira. Haa ta'uu garuu woliigalteen kun seera Dubliin deebisee hojii irra hin oolchu ykn gara hin galchu.
Mootummichi ijoolleen umurii isaanii xiqqaa ta'e biyya UK-ti akka miseensota maatiitti deebi'anii wolitti makamaniif jabeessee hojjachuu qaba. Hanga ammaatti namoota umuriin siaanii kudha saddeetaa ol ta'e ykn maatiidhaan deebisanii wolitti dabalamuun hin danda'amu.
Seerota Immigireeshiinii biyya UK
Irkattoota baqataa kan ta'an jechuunis ijoollee woggaa 18 gadii akkasumas qaadhima ykn haadha worraa/abbaa worraa osoo biyyaa hin balali'in dura wal fuudhaniin deebi'anii biyya UK keessatti walitti dabalamuu ni danda'u.
‘Osoo biyyaa hin balali'in dura kan wol fuudhan' jechuun baqataanbsun osoo biyyaa hin bayin durankan fuudhe/heerumte yoobta'eedha; isa kanaafis baqataan sun ragaa fiduutu irra jira.
Baqattoonni umurii kudha saddeetii gad ta'an maatiin isaanii akka biyya UK dhufanii itti dabalamaniif iyyachuuf mirga hin qaban.
Miseensonni maatii kan biraan (daa'imman haadha worraa/ abbaa worraa, ijoollee guddifatte fi maatii osoo biyyaa hin balali'in horatte kan biraa) gara UK dhufuu ni danda'u haa ta'uu garuu seerota ulfaatoo fi kafaltii iyyannaa ittiin guutan ni jira.
Ijoolleen umurii kudha saddeetii gadii 'Miseensa maatii' kan koolugaltummaa gaafachutti jiru ykn iyyannaa immigireeshiinii seera qabeessa biyya miseensa gamtaa Awuroppaa kamiyyuu qabu maatiidhaan wolitti dabalamuuf ni danda'u.
‘Miseensi maatii' kan hammatus haadha/abbaa, ga'eessota itti gaafatamummaa qaban, ijoollee haadha/abbaa biraa irraa dhalatan ykn maatii kan biraa, seeraa immigireeshiinii caala baldhaa dha.
Baqattoonni osoo biyyaa hin balali'in duraa fi boodaa, haati manaa/abbaan manaa akkasumas ijoolleen umurii 18 gadii deebi'anii wolitti dabalamuu danda'u.
Ijoolleen umurii 18 gadii kan koolugaltummaa argatan maatiin isaanii akka deebi'anii itti dabalamaniif iyyanna galchuu ni danda'u.
Iyyachuufhaaf mallawni hin barbaachisu akkasumas madaalli isaas kan seera immigireeshiinii irra laafaadha.
Mootummaan UK mirgoota dhala namaa kan addunyawaa kan dirqamaa kan rifuujii konveenshiin bara 1951 fi woliigaltee mirgoota dhala nama kan YlAwurooppaa kabajjuu itti fufa . Kana jechuun Mootummaan UK mirgoota baqattootaa kabajjajiuu itti fufa kunis baqattoonni akka biyya miidhaan irra gahutti hin deebifamne, mirga h9jjachuu, fi mirga barachuu fi mirga tajaajila eeggumsa fayyaa argachuuti.
Inni kun siif hiikkaa akkamii qaba?
Hamga ammaatti wanti jijjiirame hin jiru akkasumas 31 December 2020 dura wanti jijjiiramus hin jiraatu. Yeroo ceehumsaa booda haalli jiru akkamiin akka jijjiiramuu malu ammatti waan beeknu hin jiru. Kan ta'uu malu UKn miseensa Dubliin taatee akka itti hin fufnee fi seeronni immigireeshiinii biyya keessaa jijjiaramuu akka danda'aniidha.